Tangerine sy ranom-boankazo | ThermoRecipes
Tangerine sy ranom-boankazo
Rano1 minitraOlona 1100 kaloria
Tangerine sy daty, fiaraha-miasa lehibe. Ity ranon'ny Anarana iombonana y DATY dia tsara mpiray dina manohitra anemia, manohitra azy fitohanana Ary ao amin'ny mivelona amin'ny vola fanampiana mampihena.
Ny vitamina C an'ny mandarin dia manatsara ny famindrana ny hierro daty. Tangerine manamafy ny hery fiarovana, daty manana mineraly toy ny potasioma ary phosforus ary manome angovo be dia be. Ary samy mandray anjara fibre amin'ny zavamananaina. Fa izany koa ve ranom-boankazo izay mampifangaro azy ireo dia tsara.
1 Tangerine sy ranom-boankazo
2 Fitoviana amin'ny TM21
Ity tangerine sy ranom-boankazo ity dia mpiray tsikombakomba amin'ny fanoherana ny tsy fahampian-dra, manohitra ny fitohanana ary amin'ny fihinanana lanja.
Fotoana hiketrehana: 1M
Fotoana manontolo: 1M
Tangerine antonony 1 na kely roa
Datin'ny sampana 2
150 ml rano
Nataonay tao anaty vera, ny mandarin voahitsaka, ireo daty namboarina ary ny rano. Torotoro izahay mandritra 1 minitra amin'ny hafainganana mandroso 7/10.
Manompo avy hatrany izahay
Ny vola voalaza dia ho an'ny fanompoana tokana. Ho an'ny servings misimisy kokoa, azonao atao ny mampitombo ny habetsahany, mitandrina ny fotoana sy ny hafainganana.
Fitoviana amin'ny TM21
Fanazavana fanampiny - Rano manohitra anemia
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Misotro sy ranona, Tsotra, Latsaky ny 15 minitra, fitondrana, Vegan, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Misotro sy ranona » Tangerine sy ranom-boankazo
Zucchini carpaccio miaraka amina pesto vegan sy voatabia tsy ampy rano